Maansadi Murug reeb iyo Dhacdey ku timid Curiye: Cabdi qaadir Weheliye | Laashin iyo Hal-abuur
Maansadi Murug reeb iyo Dhacdey ku timid Curiye: Cabdi qaadir Weheliye
Habeen habeennada ka mid ah, ayeey ila soo hadashay gabar waxeey igu tiri walaaloow waan dhibanahay jacaylkeygi ayaa iga xiran iimana dhowa , waqtigaas jaanis ma heynin, waxaan ku iri: “Anigaa kula soo hadli doona” Iyaduna waa iga yeeshay.
Seddax daqiiqo gudahood, ayeey shan ar iisoo qortay walaal waan murugsanahay run ahaanti waan la tiiraan yooday waxaanan.axaan ku iri: “Waayahaye ii sheeg sida wax u jiraan?
Gabadhi waxay tiri: Waqti aan dheereeyn ayaan wiil aan aad u jeclaa is guursanay ka dibna safar ayuu galay, waddamada shisheeye ayuu ku xiran yahay waxaana jeclaan lahaa haddii aan caawa awoodo inaan xabsigiisa la galo hadii ay jirto sabab la iigu geeyn karo waan raadin lahaa hadii uu lug ka xiran yahay anigana mid la i xiro .
Intaa markii ay mareeyso ayaan isku dayay inaan sheekda hannaan wanaagsan u dooro tixna aan ka sameeyo maadaama aysan gabadhu ii dhoweeyn waxaan dirsaday dareenkeeyga so uu gabadha xaaladeeda dhabta ah iyo gudaheeda murugta taal uu iigu soo sawiro .
Sodi “Memory card” ayuu iigu soo xawilay waxaan sawirtay iyadoo dhiban geedaha ku maran, cadaw kastoo laga maato iyadu la maadato ,anfac iyo nool adduun ay ka soontay ,intaa hummaagyadeeda markii aan helay ayaan tixda billaabay
Maansada :(Murug – reeb )
Hadba laba mataanoo
Ku midoobay noloshoo
Muxibada kal gacalka leh
Sidi malab ka doocaan
Mid waliba midkii saba.
Dhibki waa’ la soo maray
Hadba sheeka maad loo
Magac iyo xusuus ba leh
Kaltan leeysu mariyoo
Hal muceedki boodhari
Sidi miida xoolaad
Mirta dhexe habeenkii
Sidan hadal ka loo maqal
Loo miisa hoosoo
Muska reerka taaloo
Xaajadu mushaax tahay.
Dhibku waa markiisee
Sow mudanihii qabay
Marwadii kamuu socan .
Makri iyo shil maahoo
Hadba gaasir miratoo
Sow nooli maalmeed
Sahankii ma qaayibin .
Soow maamul gaaloo
Madaxyahay midaan garan
Xilka uu ku maqanyahay
Cida uu u maqanyahay
Mihnadii waxeey tahay
Mucda iyo garaadkii
Micno iyo hankuu sido
Iyagoon maleeyn jeer
Muraadkiisa gaarka ah
Sow maxbuus kamey dhigan !.
Dabadeed mirtii dhexe
Xili uunku maatoo
Barkimada ku maranyahay
Anoo keli mushaaxoo
Minan keyga sii raba
Sow muuq haweenoo
Mugdiyada dhex liicoo
Hadba laan ku maranoo
Miyir liidan maan arag .
Dabeed ma weeydiin
Waxa aad ka maagtoo
Meehanawgan kugu riday
Bal marwooy inoo sheeg .
Marwadii waxeey tiri
Aan kuu madaalshoo
Miis kuugu dhoobee
Horta adi masuuloow
Marka hore kumaa tahay ?
Waxan iri nin maansiyo
Muud muudsadan ahay
Maqaloo bal sii dhuux
Aan kuu Mar dooxee
Miliftaana iga hoo
Haddaad miyir gadoontoo
Bal inaad madiiftoo
Iska meeyrto baan rabay.
Naftu iga mid weeyoo
Moowlaan ka baqayaa.
Kol inaan majiijoo
Bada maaxda weeyn iyo
Isku tuuro mool baas
Mudanow ka dhiidhiyay
Naar baan masuugee
Dunidaba wixii mudan
Ama maamul la i dhaho
Kol mugeed la ii daro
Taaj madaxna leey suro
Mudac aad isiisiyo
Maxaar iima doorshaan
Midabkaan ka heeystaa.
Waxaan milicsadaa jeer
Deeyrtii la soo maray
Oon maxamed caashaqay
Meherkeeni uu dhacay
Murti iyo cayaartii
Laga mariyay goobtaa
Iyo maanta sidan ahay
Mid is doorsha weeyaan .
Hadda maal adduun iyo
Manfac waan ka haajiray
Haddii uu macaan jiro
Dacar baan ka maashaa .
Haddii cadaw maluuxoo
Dadku ay ka maageen
Jiro aaga meeraha
Ani waan la maataa
Aarkaan miciinsaday .
Waxaan taa u magac dhabay
Ama aan ku taamaa
Mar inaan agtiisiyo
Mugdiguu ku noolyay
La majeerto baan rabay .
Hadduu majin ka xiran yahay
Anigana mid leey xiro
La wadaago murugtiyo
Mahadhada xanuunka leh .
Ha yeeshee masuuloow
Ma awoodo taasoo
Kummaanan kun meeyl iyo
Melyan dhaansi weeyaan
Marna laga gayooneeyn .
Ana soo makoowsaday
Mucjisadi la dheeygagay
Ilmo maax dureertoo
Qiiradu ku milantahay
Inaan mooso weheshay .
Yarti sabar u meeliyay
Dejiyoo muraal sabay
waayuhu inuu mirir
Yahay maal dhunkaaleed
Marna uu gu’ hooriyo
Yahay maax xareedeed
Gabadhii u maashiray .
Ducadii u meeriyay
Adigaa wax muuqdiyo
Waxa meel fog kaa yaal
Minid kaa qarsoomeeyn .
Lammaanahan mar kala lumay
Marjac waara ugu deeq
Cid kastoo maqaal dumay
Adigaa mudiira ehe
Waa muraayad laabtuye
U madiif ilaahoow
Manfac baan la deeyrine
Dhaqashada u mooreey
Muluqyaasha kaca iyo
Oowlaad ku meeqaam
Noloshana murtaax iyo
Uga yeel mid aan dumin
Magaca maansada (murug-reeb )
Curiye hal -abuur (cqadir weheliye )